I-Japanese spider crab: yonke into ekufuneka uyazi malunga nesi silwanyana sinomdla | Ngeentlanzi
Unobumba wesigcawu waseJapan
Amaxesha amaninzi ukhe weva ibinzana elithi "inyani iyabadlula abalandeli." Yinto eyenzekayo xa umntu eqala ukubona ifayile ye Unonkala wesigcawu waseJapan. Unonkala ofumana igama lakhe kuba uya kufana nesigcawu. Ngononkala onomdla onomdla wokuba iimpawu zakhe siza kungena kuzo kweli nqaku.
Ukuba ufuna ukwazi zonke iimfihlelo kunye nezinto onomdla kuzo ukongeza kwindlela yokuphila ye-crab yaseJapan, kule post unokufumana lonke ulwazi.
3 Ukutya kwesigcawu saseJapan
4 Ukuzaliswa kwe-crab yaseJapan
Esi silwanyana sifumana igama laso kuba sikhangeleka kakhulu njengesinambuzane okanye saziwa njengesigcawu. Umzimba wayo unokufikelela kubude obumalunga neesentimitha ezingama-37 ukusuka kwimilenze yawo emikhulu uyinike amaphiko ewonke afikelela kwiimitha ezingama-3,70 kwaye afikelela kwi-20 kilos ubunzima. Kuyaziwa ukuba yenye yezona ndawo zinkulu ze-arthropod motifs emhlabeni. Yinto engenamqolo omzimba wayo uhlanganiswe ngumphandle wenziwe ngothotho lwamacandelo alinganayo.
Unonkala ongaboniyo kwaphela, kodwa oku akuyi kubangela naziphi na iingxaki kwisilwanyana. Njengoko sisazi, kwindalo izilwanyana ziqhelana nokusingqongileyo kwaye zitshintshe indlela yokusebenza ukuze ziphile. Ukuze aphumelele kwindawo apho angaboniyo, unendlebe enamandla, ephucukileyo. Ukongeza, inezincinci ezinesakhono sokubamba amaza esandi kulo lonke ulwandle ngaphandle kokusebenzisa indlebe yokwenyani.
Ukuthatha nokujonga le ntlobo yinto efanelekileyo. Ngomnye woononkala abanobuchule obukhethekileyo e-Asia. Abantu baseAsia bayakwazi ukuya emazantsi olwandle ukuya kukhangela oononkala ukuze bababeke ngendlela egqibeleleyo ezityeni. Imilenze ye-crab yesigcawu ingaba ngaphezu kweemitha ezimbini ubude. Imilenze enee-tweezers inde kakhulu kunenye. Umzimba wayo ngokubanzi unesimo esingunxantathu kwaye yenza esi silwanyana sifikelele kwiphiko elikhulu kakhulu.
Ngokwenzululwazi, iinzipho zaso zinokuba namandla ngaphezu kwemihlathi yengwenya. Oku kuyenza ibe sesinye sezilwanyana eziyingozi kakhulu. Isilwanyana esirhamncwa kakhulu kwaye sidibanisa iinzipho njengesixhobo esibulalayo, ngenxa yoko amaxhoba ambalwa anokubaleka ekubanjweni.
Ezi ntlanzi zihlala zihlala ezinzulwini ezinamanzi abandayo ajikeleze iJapan. Kwinzulu a Ihlala ifumaneka emiqolombeni engaphezulu okanye ngaphantsi kwe-600 yeemitha ubunzulu.
Uphawu oluthile lwe-crab yaseJapan yi-crypsis. Yinto eyenzekayo ukuba ezinye izinto ezikhoyo zingaqwalaselwa ziimvakalelo zezinye izilwanyana. Yindlela efana kakhulu nokufihla kwaye inokuthathwa njengohlobo lwendlela yokukhusela. Kwimeko yeli nonkala, obu buchule buqulathe ukubambelela kwintsalela efumaneka elwandle. Ngale ndlela, ezi zinto zisetyenziselwa ukuzifihla. Olu hlengahlengiso lunokwenzeka kunye naye ngexesha elifanelekileyo lexesha elibangela ukuba, ekugqibeleni, liwe kwaye kufuneka endaweni yalo. Ukuba imeko ye-crab kufuneka itshintshe, ikwalungisa umhombiso wayo kwaye iqale ingqokelela entsha yamathambo ukubambelela emzimbeni wayo.
Eyona ikufutshane le nkalaka ifunyenwe kumphezulu womhlaba yile ngaphezulu okanye ngaphantsi kweemitha ezingama-50 kwaye kuphela kwixesha lasentwasahlobo. Kungenxa yokuba abantu ababhinqileyo benyukela phezulu ngaphezulu ukuze bazale. Ke ngoko, akunakulindeleka ukuba uninzi lwamabali ahlambalaza esi silwanyana ayinyani.
Ukukhusela ezi ntlobo ekutshatyalalisweni, akuvumelekanga ukuloba oononkala besigcawu baseJapan entwasahlobo, kuba ilixesha lokuzala. Esi silwanyana abakho ndlongondlongo, ke isebenza njengenjongo yokuhombisa kwaye inokuphakanyiswa ngokugqibeleleyo kwi-aquariums.
Ukutya kwesigcawu saseJapan
Nangona uninzi lwabantu lunesi silwanyana kuba siza kuchazwa njengokutya umntu, esi silwanyana sondla kuphela izilwanyana ezifileyo kunye nejellyfish. Inokuchazwa njengokutya nje komqhekezi. Nangona kunjalo, masithi ukutya kwabo kuyondla. Oku kukuvumela ukuba udle izilwanyana kunye nesityalo. Ngamanye amaxesha inokusebenza njengokususa izilwanyana ezifileyo kwiindawo zasemanzini apho ihlala khona.
Ngombulelo kwimilenze yayo emikhulu, inokukrwela amazantsi enzonzobila ikhangela izityalo kunye nolwandle. Ngale ndlela, unokunyanzela uhlobo lokuvula kwiigobolondo zezinye zeemollusk ezilusizi ezisendleleni yakho. Nje ukuba badibane noluhlobo lweemollusk, ziphela zityiwa.
Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko unonkala wesigcawu waseJapan unokuhlelwa njengomntu odlayo. Kungenxa yokuba, ngokuchaseneyo noko kucingelwayo malunga nale ntlobo, inesimo esifanelekileyo se-ductile. Abanye abantu bayoyika esi silwanyana kodwa ikakhulu kungenxa yokubonakala kwaso. Abantu abanonxibelelwano ngqo nesi silwanyana bathi asikho ndlongondlongo kwaphela. Ngokuchasene noko, Inendlela ethile yokuziphatha ethambileyo. Ngamanye amaxesha ude azivumele ukuba atotwe.
Ukuzaliswa kwe-crab yaseJapan
Ukuzaliswa kwabo ngokwesondo kunye ne-oviparous. Ezi zilwanyana zinamalungu esini adibeneyo. Olu hlobo lokuzala luqukethe eyindoda ethwele imazi ngaphezulu ngexesha lokudibana. Le nkqubo inokuthatha phakathi kwe-5 kunye neeyure ezingama-6, kodwa oononkala banokuhlala kwesi sithuba kude kube ziintsuku ezi-3 kamva.
Abafazi ngabo abenza ukubekwa kuqhotyoshelwe kwi-pleopods de amaqanda aqandusele. Amadoda awanalo ilungu lokwenyani lokukopa kodwa kunokuba nesihlomelo esiguquliweyo ukwenza lo msebenzi. Ngolu hlobo lwe-appendix, indoda inoxanduva lokudlulisa i-spermatophore kumfazi. Yindlela eyakhiwe ngayo inzala entsha. Ukukhula kwabo kubandakanya izigaba ezininzi zemibungu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nononkala wesigcawu waseJapan kunye nezinto ezibanga umdla kuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Unobumba wesigcawu waseJapan